प्रचण्डलाई कार्यकारीको फिलिङ नभएपछि…. - Kathmandu Express
प्रचण्डलाई कार्यकारीको फिलिङ नभएपछि….
महालक्ष्मीमा नगर प्रहरी, मेयरले लगाइदिए दर्ज्यानी चिन्ह (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं– २०७६ सालको जेठ १६ गते प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र आफूले आधा–आधा कार्यकाल आलोपालो गर्ने सहमति भएको बताएर नेकपामा रडाको मच्चाउन सुरु गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभियानले अझैँ पूर्णता पाएको छैन । उहाँको चाहना के हो भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । उहाँले कार्यकारी अध्यक्ष चाहनु भएको हो कि प्रधानमन्त्री चाहनु भएको हो कि अथवा ति दुवै पद चाहनु भएको हो ? वा पार्टी विभाजन चाहनु भएको हो ? सायद यो कुरामा उहाँ आफैं अन्यौलमा हुनुहुन्छ ।
दाहालको पछि लागेर पार्टीमा अस्थिरताको खेतिपाती गर्न लागेका नेताहरुले पनि प्रचण्डको चाहना के हो भन्ने बुझेको जस्तो देखिँदैन । बरु प्रचण्डको ब्लाङ्क फायरको साक्षी बस्ने काम उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ ।
प्रचण्डले गतबर्षको मंसिरसम्म आफूले अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्दछ भनेर सरकारलाई हल्लाउने काम गर्नुभयो । त्यसबेलासम्म माधव नेपाल सहितका सचिवालयका अन्य नेताहरुले प्रचण्डको यही एजेण्डामा साथ दिनुभयो र भन्नुभयो ‘प्रचण्डले अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाउनु पर्दछ । त्यसका लागि केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्दछ ।
गतवर्षको मंसिरको चार गतेसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुने माग सरक्क छाडेर कार्यकारी अध्यक्षको पद लिनुभयो । उहा“लाई साथ दिने नेताहरुलाई प्रचण्डले यो कुराको सुइ“कोसम्म दिनुभएन । उहा“हरुले सञ्चार माध्यमबाट प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष भएको जानकारी पाउनुभयो । त्यसको केही दिनमा प्रचण्डले कान्तिपुर दैनिकमा अन्तर्वार्ता दिनुभयो ‘अहिलेचाँही मैले कार्यकारी फिलिङ गरिरहेको छु । त्यस अन्तर्वार्ताको सार के थियो भने प्रधानमन्त्रीका लागि लडभिड गरेकै कारण मैले कार्यकारी अध्यक्षको पद पाए“ ।
कार्यकारी पाएको महिना दिन नवित्दै उहाँलाई कार्यकारीको फिलिङ फिका फिका लाग्दै गयो । त्यसपछि वैशाखमा पुग्दा उहाँले कार्यकारी म होइन रहेछु भन्ने फिलिङ गर्न थाल्नुभयो । मलाई पूर्ण अधिकार सहितको कार्यकारी चाहियो भनेर अर्को भाउतो झिक्नुभयो । उहाँलाई साथ दिने नेताहरु अचम्मित हुँदै फेरि प्रचण्डको यो एजेण्डामा साथ दिन थाल्नुभयो ।
यो क्रमको पछिल्लो शिलशिलाको रुपमा २१ कार्तिकमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा प्रचण्ड सहित पाँच नेताको बैठक बस्यो । बैठकले पार्टी सचिवालयको माग गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निवेदन हाल्ने निर्णय ग¥यो । यही विन्दुबाट प्रचण्डलाई कार्यकारीको फिलिङ हराइसकेछ भन्ने अनुभूति आम नेकपाका कार्यकर्तालाई भयो । किनकि उहाँ त बैठक आयोजना गर्न सक्ने हैसियत भएको पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष हो ।
प्रचण्ड अहिले फूटबल मैदानमा पहेंलो कार्ड पाउन लागेको खेलाडीको नियतिमा हुनुहन्छ । उहाँको यो चरित्र रहिरहने हो भने नेकपाका आम कार्यकर्ताले उहाँलाई आगामी महाधिवेशनमा रातो कार्ड दिएर खेल मैदानबाट बिदा गर्ने छन् ।
यस अघि कार्यकारीको हैसियतमा एक÷दुई पटक बैठक राख्ने सामान्य र कहिले असफल अभ्यास गरिसक्नु भएको हो । पार्टी सचिवालयले गतवर्षको मंसिरमा र स्थायी कमिटीले गत भदौमा कार्यकारी अधिकार सुम्पेका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी बैठकको माग गर्दै निवदेन दिने कुराले उहाँमा बचेखुचेको फिलिङ कार्यकारी ११ महिना नवित्दै सुकिसकेको स्पष्ट भएको छ । प्रचण्डको एजेण्डमा साथ दिने नेता गणहरुलाई पनि लाग्दो हो किन प्रचण्ड एउटै एजेण्डामा अडिन सक्नुहुन्न ? कसैलाई लाग्दो हो प्रचण्ड गतिशील छन् त्यस कारण एउटै एजेण्डामा अडिंदैनन् । अर्काथरीलाई लाग्दो हो, अवसरका लागि प्रचण्डले सधैं एउटै एजेण्डा बोक्दैनन् । किनभने उनको अस्थिर चरित्र अद्यपि कायमै छ । सचिवालय बैठक आयोजनाका लागि हिजो प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डले निवेदन हाल्नुभएबाट स्पष्ट के भयो भने उहाँमा नेकपाका विशाल संख्याका कार्यकर्तालाई नेतृत्व गर्ने क्षमतामा प्रश्न चिन्ह छ । उहाँले गरेका गुटगत गतिविधिहरु त्यसकै उदाहरण हुन् जसले नेकपा जस्तो भिमकाय पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा उहाँलाई प्रश्न गर्छ ।
आफूलाई पार्टीले जिम्मा दिएको पार्टी सञ्चालनको काम भन्दा पनि सरकारका काममा हस्तक्षेप गर्ने, एउटै पार्टीको सरकार भन्दा पनि गठबन्धन शैलीले सरकार सञ्चालन गर्न दबाब दिने प्रचण्डको स्वभावले नेकपामा अहिलेको समस्या पैदा भएको हो । त्यो भन्दा पनि जड कुरा पूर्व एमालेका बरिष्ठ नेताहरुले प्रचण्डलाई फुटबल खेल्ने मैदान उपलब्ध गराइदिनुभएको छ, जुन मैदानमा प्रचण्डले कुनै नियमको पर्वाह नगरी जथाभावी गोल हान्दै हुनुहुन्छ । यस्तो बेलाको खतरा के हो भने जब खेलाडीले खेलको नियम भन्दा बाहिर गएर खेल्छ तब रेफ्रिले सिटी बजाएर सजग गराउछन् । फेरि पनि नसुध्रिए पहेंलो कार्ड दिएर सचेत गराउँछन् । त्यति गर्दा पनि नमाने रातो कार्ड दिएर मैदान बाहिर पठाइदिन्छन् । प्रचण्ड अहिले फूटबल मैदानमा पहेंलो कार्ड पाउन लागेको खेलाडीको नियतिमा हुनुहन्छ । उहाँको यो चरित्र रहिरहने हो भने नेकपाका आम कार्यकर्ताले उहाँलाई आगामी महाधिवेशनमा रातो कार्ड दिएर खेल मैदानबाट बिदा गर्ने छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध फूटबल हान्न प्रचण्डलाई जसले मैदान उपलब्ध गराउनु भएको छ, खेलको नियम नमान्ने खेलाडीले भोली उहाँहरुको आँगनमा पनि फुटबल हान्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । त्यसबेला अहिले मैदान उपलब्ध गराउनेहरु उनै प्रचण्डका विरुद्ध हुनेछन् । त्यो समय आउने धेरै कुुर्नु पर्ने छैन । जब नेकपामा महाधिवेशन केन्द्रित विचारको बहस सुरु हुन्छ त्यस विन्दुबाट पूर्व एमालेका बरिष्ठ नेताहरुले प्रचण्डले आफ्नो आँगनमै गोल हानेको महशुष गर्नुहुनेछ । त्यति बेला अहिलेको ओली विरुद्धको मित्रता क्षणभरमै बालुवाको घर हुने कुरामा दुईमत छैन ।
पार्टीलाई लयमा फर्काएर महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि सुरु हुन थाले मात्र पनि नेकपामा यो गठबन्धन तोडिएर नयाँ रमिताको प्रारम्भ हुनेछ । त्यसबेलासम्म प्रचण्डलाई फिलिङ कार्यकारीको ह्याङ ओभरले पूर्ण रुपमा छोडिसकेको हुनेछ ।
Next articleथपिए दुई हजार ८१७ कोरोना सङ्क्रमित
ललितपुर, महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका नगर प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नव नियुक्त नगर प्रहरीका लागि सञ्चालित ३० दिने आधारभूत तालिमको...
एनआरएनए कोषाध्यक्षमा जापानबाट अरुण श्रेष्ठको उम्मेदवारी
अपाङ्गता आन्दोलन अन्धविश्वास चिरेर अधिकार प्राप्तिको युगमा प्रवेश गरेको छ : उपाध्यक्ष दहाल
कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्तावसहित ४२ जनाको हस्ताक्षर बुझाइयो